MUQAA;-Madaxweyne Xasan Sheekh oo furay shirka dib u heshiisiinta gobollada Dhexe, Muqdishana ku soo laabtay(Sawirro) – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa soo gabagabeeyey safarkii uu ku tagay degmada Dhuusa-mareeb ee gobolka Galgaduud, isagoo si rasmi ah u soo furay shirka dib u heshiisiinta beelaha dega gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay safarkiisa ku wehliyeen wasiirro ka tirsan Xukuumadda, ayaa waxaa si weyn degmada Dhuusamareeb ugu soo dhoweeyey, maamulka gobolka, odeyaasha Dhaqanka, siyaasiin, Xildhibaanno iyo kumanaan dadweynaha degmadaasi.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa meelo kala duwan oo Dhuusamareeb ah booqdey, halkaasi oo ay si weyn ugu soo dhoweeyeen bulshada degmada, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa soo indha-indheeyey halka loogu talagalay in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Madaxweynaha, ayaa sheegay in gobollada dhexe dalka Soomaaliya guud ahaan ay u leeyihiin muhiimad gaar ah, isla markaana ay muhiim tahay midnimada dadka deegaanka dowladda dhexena ay si gaar ah xil isaga saareyso sidii loo gaari lahaa, maamul iyo kala dambeyn, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaana si rasmi ah u furay shirka dib u heshiisiinta ee Mudug iyo Galgaduud kaddib munaasibad uu uga qeyb-galay Hoolka shirkaasi lagu qabanayo.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa bulshada gobollada dhexe ugu baaqay in ay midoobaan oo ay shirkan ka soo saaraan tallooyin ku dhisan degnaansho iyo wadajirka dadweynaha Soomaaliyeed ee Mudug iyo Galgaduud, waxa uu intaa raaciyey in lagama maarmaan ay tahay maamul ay yeeshaan gobollada dhexe.
Ugu dambeyntii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa degmada Dhuusamareeb tababar ugu soo xiray ciidamo ka tirsan hey’adda NISA, waxa uu madaxweynuhu u jeediyey dardaaran ku aaddan in ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ka difaacaan kuwa nabadda diidan, isla markaana ay ka mid noqdaan ciidamada Qaranka Soomaaliyeed ugu dhaqanka wanaagsan, iyagoo dhowraya Xaquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Madaxweynaha iyo wefdigiisa, ayaana caawa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Sawir Qaade Ilyaas